को थिए रत्नकुमार वान्तवा ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS को थिए रत्नकुमार वान्तवा ?
को थिए रत्नकुमार वान्तवा ?
इलामः निरङ्कुश पञ्चायती सत्ता विरुद्ध आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका रत्नकुमार वान्तवाको ६६ औँ जन्मजयन्ती तथा ३९ औँ स्मृति दिवस मनाइँदैछ । रत्न बम प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष वान्तवाको स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि उनको जन्मस्थल चमैता चित्रेमा स्मृति दिवस आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा देवी क्षेत्री दुलालले बताए ।
उनको जन्म २००८ साल चैत २७ गते इलाम चमैताको चित्रे ९हाल देउमाइ नगरपालिका–१० मा गर्जमान र पुष्पमाया राईका ११ सन्तानमा तीनवटी दिदीपछि जेठो छोराका रूपमा भएको थियो । उनको बाल्यकाल अभाव र गरिबीमा बित्यो । प्रारम्भिक चरणको शिक्षा चमैतामा पूरा गरी कक्षा ७ सम्म इलामको नारायणस्थानमा आफ्ना मामा गणेश राईको घरमा बसेर उनले पढेका थिए । कक्षा ८, ९ र १० पढ्नका लागि पाँचथरको फिदिम हाइस्कुल गए । त्यतिबेला बुबा फिदिममा प्रहरीको जागिरे भएकाले रत्नकुमार पनि बुबासँगै पाँचथर पढ्न पुगेका थिए ।
२०२८ सालमा उच्च शिक्षाका लागि धरानमा काका नाता पर्ने तुलराम देवानको घरमा बसेर आईए पढ्न थाले । तुलरामका छोरा बम देवानसँग रत्नको राम्रो मित्रता कायम रह्यो । उनले धरानमा पढे पनि त्यसको वार्षिक परीक्षा भने इलाम क्याम्पसबाटै दिए । आईए उत्तीर्ण गरेर बीएड पढ्न २०३० सालदेखि उनी काठमाडौंमा दुई वर्ष बसे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट उनले २०३२ सालमा बीएड उत्तीर्ण गरी इलाम फर्किए । इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा लगभग छ महिना अध्यापन गरी पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि अध्यापन कार्यलाई छोडेर उनी जनताको माझमा गए । धरानमा आईए पढ्दै गर्दा २०२८ सालमा झापामा विद्रोह शुरु भयो । झापा विद्रोहले रत्नकुमारमा गम्भीर छाप छाड्यो । वामपन्थी विचार राख्ने बम देवानले पनि रत्नकुमार वान्तवालाई कम्युनिज्मका बारेमा लेखिएका किताब, पत्रपत्रिका तथा अन्य सामग्री पढ्न दिएर सहयोग गरे । उनीभित्र बढ्दै गरेको कम्युनिष्ट मोह काठमाडौंमा गएपछि झाँगियो । २०३० साल असार १५ गते कीर्तिपुरमा रत्नकुमार वान्तवाको भेट हालका नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलसँग भयो । पोखरेल र वान्तवा एउटै कक्षा र एउटै विषय अध्ययन गर्ने सहपाठी थिए ।
वि.सं. २०३२ सालमा अखिल नेपालको अडिनेसन केन्द्रको इलाम जिल्ला कमिटी गठन भयो । यसको सचिव थिए झलनाथ खनाल । अन्य सदस्यमा रत्नकुमार वान्तवा, गणेश राई, अगम वान्तवा, भक्त देवान, बमप्रसाद वान्तवा र वसन्त पराजुली थिए । बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्दै गाउँगाउँमा गएर जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ रत्नकुमार वान्तवा क्याम्पसको जागिर छाडेर २०३३ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले ।
रत्नकुमार वान्तवाले २०३४ सालमा चमैताको आफ्नै घरमा सुरुङ बनाए । त्यसमा बमप्रसाद, डिल्ली, मोहन र पदमको समूह लागेको थियो । रत्नकुमार वान्तवा वैज्ञानिक र व्यावहारिक ज्ञानमा पोख्त थिए । उनको प्रत्यक्ष निर्देशन र कल्पनामा बनाइएको सुरुङभित्र ६–७ जना बसेर छलफल गर्न सक्ने ठाउँ छ । सुरुङको एउटा मुख रत्नको घरमा थियो भने अर्को मुख जङ्गलको बीचमा थियो । तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०३५ पुस ११ गते संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएका रत्नकुमार वान्तवा पूर्व उत्तर क्षेत्रको इन्चार्ज थिए । उनको कार्यक्षेत्र इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्ला थिए । २०३५ साल माघमा नेकपा माले इलाम जिल्ला कमिटी गठन भयो र त्यसका सचिव पनि रत्नकुमार वान्तवा नै भए ।
पाँचथरको सुकेपोखरी प्रहरी चौकीबाट २०३५ साल मङ्सिरमा गस्तीमा गएका एक प्रहरीलाई चमैताका किसानले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरे । प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर किसानले कुटेपछि त्यो विद्रोहको पछाडि रत्नकुमार वान्तवाको हात छ भन्ने कुरा प्रशासनले थाहा पायो र चमैता, चित्रे, इभाङमा व्यापक ‘सर्च अभियान’ चलाउन थाल्यो । २०३५ फागुन २१ गते सुखानीमा मारिएका ५ जनाको स्मृति दिवस पारेर इलामभर व्यापक पर्चा छरियो । यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व रत्नकुमार वान्तवाले गरेका थिए । त्यस समयमा झलनाथ खनाल झापा जेलमा थिए भने तत्कालीन नेकपा मालेको केन्द्रीय कमाण्डरका रूपमा रत्नकुमार वान्तवाले इलामलगायतका पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा शहीदको बदला लिन पञ्चायती शासन ढाल्ने, राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने र जनवादी शासन स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ पर्चा छरेका थिए ।
सङ्गठन निर्माणका क्रममा रत्नकुमार वान्तवा इलामको नाम्सालिङ पुगेको कुरा सुराकीबाट थाहा पाएपछि प्रहरीले २०३५ चैत २४ गते नामसालिङका लोकबहादुर लिम्बूको घरमा घेरा हाल्यो । त्यतिबेला रत्नकुमार बान्तवा, जैमिला राई र डिल्लीप्रसाद राई घेराउमा परे । रातको समयमा प्रहरीको आँखा छलेर रत्नकुमार वान्तवा भाग्न सफल भए र साथीहरूलाई पनि भगाए ।
रत्नकुमार वान्तवाको खोजीमा निस्किएको प्रहरीले २०३५ साल चैत २४ गते इभाङमा रत्नकुमार वान्तवा भन्ने ठानेर गाउँले किसान निमा शेर्पालाई गोली हानेर हत्या गर्यो । निमा शेर्पाको अनुहार र जिउडाल रत्नकुमार वान्तवासँग मिल्दोजुल्दो थियो । सुराकीले रत्नकुमार भनेर औँल्याएपछि निमालाई प्रहरीले गोली हानेको थियो तर पछि रत्नकुमार वान्तवा नभएर अर्कै व्यक्ति मारेको थाहा पाएपछि प्रहरी वान्तवाको थप खोजीमा निस्कियो ।
इभाङमा रहेका एक किसानको घरबाट २०३५ चैत २७ गते बिहान साढे चार बजे उठेर रत्नकुमार वान्तवा, सुशीला श्रेष्ठ, अगम वान्तवा र कुसुम राई ताप्लेजुङ हिँडेका थिए । अलिकति अगाडि बढेपछि प्रहरीसँग उनीहरूको जम्काभेट भयो । प्रहरीसँगै आएका सुराकीले औँल्याएपछि अगाडि रहेका वान्तवालाई प्रहरी विष्णु राईले गोली हाने । रत्नकुमार वान्तवाले पहिलो गोली छले र खुकुरी झिकेर प्रहरीमाथि जाइलागे । दोस्रो गोली पनि छलिएर अर्को प्रहरीलाई लाग्न पुग्यो । तेस्रो गोलीले रत्नकुमार बान्तवाको छाती फोरेर मुटुलाई छेड्यो । यसरी रत्नकुमार वान्तवा २७ वर्ष पूरा गरेर २८ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जन्मदिनमै प्रहरीको गोलीद्वारा मारिए ।
रत्नले सहादत गरेको १ महिना नबित्दै बमप्रसाद वान्तवाको २०३६ साल बैशाख २८ गते साखेजुङ गैरीबासमा हत्या गरिएको थियो । रत्नकुमार वान्तवाले शहादत प्राप्त गरेको ३७ वर्षपछि २०७२ फागुन २२ गते उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो । वान्तवाको स्मृतिमा इलाम नगरपालिका–१ साखेजुङमा रत्नकुमार वान्तवा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटसमेत सञ्चालनमा छ ।
वान्तवालाई गत वर्ष यसरी सम्झिएका थिए ईश्वर पोखरेलले
गत वर्ष वान्तवाको ६५ औँ जन्मजयन्ती तथा ३८ औँ स्मृति दिवसमा चित्रेमा निर्माण गरिएको रत्नकुमार वान्तवा र बमप्रसाद वान्तवाको शालिक उद्घाटन गर्न आएका नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले उनलाई सम्झिए । ‘उसबेला एउटै कोठामा बस्थ्यौं, एउटै कक्षामा एउटै विषय पढ्थ्यौं । रोल नम्बर पनि ठीक अघि–पछि थियो,’ रत्नकुमारसँगको सामीप्यताबारे नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सम्झिए, ‘हुन त देहान्त भएपछि धेरै जनाको विषयमा काल्पनिक कथा बनाइन्छन् । तर, रत्न यस्ता प्रतिभा थिए, जो एकैपटक २ हातले बेग्लाबेग्लै विषयमा लेख्न सक्थे । आफूलाई ठीक लागेका काम दृढ भएर गर्ने, बाजा बजाउन, गीत गाउन र हरेक कामको विशिष्ट प्रतिभा झल्किन्थ्यो रत्नमा ।’
शहीद रत्नको जन्मघर पुगेर पोख्रेलले रत्नसँगको युवाकालका स्मृति बाँडे । कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीउ झाँगिँदै गरेका बेला रत्नले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै पोख्रेलले भने, ‘सँगै बस्ने र राजनीतिक गतिविधि गर्ने क्रममा २०३३ सालमा म रत्नसँगै उनको यो घरमा आएको थिएँ,’ उनले सुनाए, ‘मेरो अत्यन्त घनिष्ट साथी रत्नको हत्या भएको खबरले अहिले पनि भावुक हुन्छु । उनी भूमिगत रूपमा कति लगनशील भएका थिए भन्ने चर्चा गरेर सकिँदैन ।’
(रत्नबम प्रतिष्ठानका अध्यक्ष देवी क्षेत्री दुलालको रत्न वान्तवासम्बन्धी पुस्तक र उनीसँगको कुराकानीबाट)
प्रदेश प्रोटलबाट साभार